Famonoana zaza mianadahy tany Antsirabe Naiditra am-ponja vonjimaika ilay raim-pianakaviana
Efa natolotra ny fitsarana ny raharaha ka any am-ponja no miandry ny fitsarana azy ilay raim-pianakaviana.
Tsiahivina fa nosamborin'ny polisy ilay raim-pianakaviana izay namono ny zanany mianadahy tao Antsirabe. Rehefa natao ny fanadihadiana mahakasika ity raharaha ity ity dia tsy nahitana olana na hoe nisy korontana tao amin'ny tokantrano nisy an'ity lehilahy ity. Nolazainy fa maheno feo ny hiakiakan'ny zanany foana izy miantso vonjy fa mijaly ireo zanany. Nanapaka hevitra ary ilay lehilahy fa mba hanafahana izany fijalian-janany izany dia hovonoiny ireto farany.
Ny faha 9 janoary 2020 lasa teo raha nandeha nivoaka ny trano ilay renim-pianakaviana ka namela azy 3 mianaka irery tao an-trano, dia teo no namonoan'ilay raim-pianakaviana ilay zanany lahy vao efa-bolana monja ary nitarika ny fahafatesany. Taorian’izany dia nentiny nivoaka ny trano ihany koa ilay zanany vavy vao 18 volana ary novonoiny tany anaty ala tao amin’ny fokontany Amboronomby. Tsy hita moa ny vata mangatsiakan’ity zaza ity raha tsy ny zoma faha 10 janoary tokony ho tamin’ny 06 ora hariva. ilay raim-pianakaviana nahavanon-doza kosa dia voasambotry ny Polisy ny sabotsy faha 11 janoary 2020. Niaiky ny heloka nataony ity lehilahy ity ary efa saika namono tena ihany koa izy saingy izao tra-tehaky ny Polisy izao.